I-China Tennis Backpack Iingxowa ezinkulu zeTennis zaBasetyhini kunye naMadoda ukuba zibambe iRacket yeTennis, i-Pickleball Paddles, i-Badminton Racquet, i-Squash Racquet, iiBhola kunye nezinye izinto ezincedisayo ukwenziwa kunye neFektri | Umzingeli omtsha
Ibhegi yeTennis eNkulu yeTennis yeTyhini yaBafazi kunye naMadoda yokuBamba iRacket yeTennis, iPickleball Paddles, iBadminton Racquet, iScash Racquet, iiBhola kunye nezinye izinto
Izinto: Amakhekhethi eqhwa ePolyester
Ubukhulu:13.4 * 6.7 * 17.7 intshi / 34 x 17 x 415 cm (L * H * W)
Umbala:Mnyama; Ngwevu; Ientyatyambo eziBomvu; Floral eluhlaza
Ixabiso leFOB XIAMEN: $ 8.6-12.6
B OGQIBELELEYO TENNIS OGQIBELELEYO】Ubhaka weTennis uneepokotho ezi-5 zokubamba zonke iimfuno zakho zetenisi kunye nezixhobo zokugcina ulungelelwano, ezilungele wena ukuba uziphathe kwaye ugcine iirakethi zakho zentenetya zikhuselekile. Kwakhona i-1 yeepokotho ezinkulu zebhotile yamanzi kumacala omabini nge-elastic band ephezulu ukubamba ngokukhuselekileyo iibhotile ezinkulu zemidlalo.
UKUSEBENZA KWEZIKHONO KUNYE NEZIPHAKATHI EZININZIIgumbi elikhulu eli-1 elikhulu lokubamba iimpahla, izihlangu, isweatshirt, itawuli, itape yokubambelela, njl.Igumbi le-racket elinikezelweyo linokukhusela kwaye libambe i-racquet ye-tennis eyi-2-3 okanye ezinye izinto zentenetya kakuhle. 1 uziphu epokothweni yobuqu ilungele ukutya okulula, umnxeba, isipaji, amaqhosha okanye izinto ezincinci. 1 ipokotho yebhola enzulu yokugcina iibhola ezininzi, kwaye kukho ipokotho efihliweyo ngasemva kwizinto zakho ezibalulekileyo.
IZINTO EZIPHAKAMILEYO ZOMGANGATHOLe bhegi ye-tennis yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, ezilula kodwa zomelele. Yenzelwe ukuba ibe lula kwaye intofontofo, le ngxowa ye-tennis yomeleleyo ifanelekile kubafazi okanye emadodeni kwaye kufanelekile ukuphatha ngemitya egxalabeni.
UKUQHUTYWA KWENKQUBO】Le bhegi iphathekayo inokusetyenziswa njengemisebenzi emininzi yangaphandle yebhegi, enje ngeebhakethi zeebhola zokukhetha ibhola, ibhegi yebadminton, ibhegi ye squash kunye nokunye. Kananjalo inokusetyenziswa njengepakethi yokuhamba. Eyakhelwe-ngaphakathi kwiPort yokutshaja i-USB, iPortphone Port kunye neepokotho ezininzi.
Esimisebenzi mininzi ubhaka yentenetya, kulula ukubamba irakhi yentenetya, iipali zebhola ekhatywayo, iadminton racquet njalo njalo,
ilungele imidlalo eyahlukeneyo yangaphandle.
Soloko ulungele umdlalo okhawulezileyo epakini kunye nebhegi yentenetya e-ethe-ethe eyenzelwe iimbaleki kuwo onke amanqanaba ezakhono.
Okulandelayo: Ingxowa yeLunch ephothiweyo yeLunch Box Box Canvas Ilaphu ngeFoyile yeAluminiyam, Isidlo sasemini iTote Handbag yaBasetyhini, amaDoda, iSikolo, iOfisi
Amanzi Big Bag enemingxuma
Ezemidlalo Soccer ubhaka kunye Ball Igumbi Cl ...
Ihowuliseyili iBhola yoGcino lweeBhola zeBhegi yeB ...
Ezinkulu Sport Basketball ubhaka kunye Ball Compa ...
Yangaphandle Soccer Sports Bag Basketball ubhaka F ...